Izindaba ze-forex | Ukubuyekezwa Kwezezimali kusuka ezimakethe zezimali ze-FXCC
Ikhaya / Mayelana / Mayelana ne-FXCC / Company Izindaba
Izindaba ze-Company & Ukukhangisa Ukuhweba
I-FXCC iyajabula ukumemezela ukuqhubeka komkhankaso wethu Wokuphromotha
Ngenxa yesithakazelo esikhulu kumkhankaso wethu wokuphromotha, i-FXCC iyajabula ukwazisa amaklayenti ethu kanye nabalingani bethu ukuthi ukunikezwa kweBhonasi kuzoqhubeka ngo-Okthoba.
Ukunyuswa kwebhonasi kuhloswe ngokuvuza amakhasimende ethu amasha kanye namakhasimende ethu athembekile ngokuhlanganisa ibhonasi ye-100% Yokuqala-up ngebhonasi ye-50% Yezimali zokufaka imali ngayinye ngenyanga! Futhi lokho akuyona yonke into - ngokuhwebelana ngalunye kwenza amakhasimende ethu athole izikweletu, lapho sibavuza abathengisi bethu abathembekile ngezimali zangempela, ezihoxiswayo.
Ulungele ukusebenzisa izinzuzo zale phromoshini? Chofoza lapha ukuze uqalise uma ungenalo i-akhawunti okwamanje.
Amaklayenti asevele anayo i-akhawunti ne-FXCC futhi afisa uku ujoyine iphromoshini wamukelekile noma nini isikhathi sokubiza ibhonasi!
* Sicela ubheke imigomo nemibandela yemininingwane yephromoshini yeBhonus.
I-FXCC iqalisa isayithi elisha ukwamukela amaklayenti angewona ase-EU
Njengengxenye yokuqhubeka kwethu ukukhulisa ukufinyeleleka kwethu kwamanye amazwe nokwandisa inkonzo yethu ezithameli zomhlaba wonke, i-FXCC ivule iwebhusayithi entsha yokuhweba eyobambisana namakhasimende ethu angewona we-EU, noma amakhasimende aseYurophu angayithengi kusuka e-EU Inhloso yukuthi sinikeza ukufinyelela okulula kwimikhiqizo namasevisi wethu, ngenkathi sigcina indawo yokuhweba ephephile kumakhasimende ethu.
Ukucabangela inani elikhulayo labathengisi abangena emakethe ye-forex, sithathe umsebenzi ukuze sikwazi ukuhweba izimo zokuhweba, sinikeze amathuluzi okuhweba ahlukahlukene kanye nemikhiqizo, ngenkathi sigcizelela ukubonakala nokuthembeka ngaso sonke isikhathi.
Ukuba omunye wamafemu afanelekayo futhi athembekile embonini, umgomo wethu ukuphucula amakhasimende ethu ukufinyelela emakethe ye-forex ngenkathi ehweba nomdayisi olawulwayo.
I-China Union Pay ukuqaliswa kwabathengisi be-forex baseShayina
Sesanda kusungula inketho yokukhokha okunye nokukhokha i-akhawunti ngokubambisana ne-China Union Pay. Ekudaleni lobu buhlobo obusha sivula isango, sivumela abathengisi abasha nabasaziwayo beFX emazweni ase-Asia njengeChina, ukudayisa ngqo ngokusebenzisa imodeli yokuhweba ye-ECN FX ye-FXCC.
I-China UnionPay yasungulwa ku-2002, inkampani isiye yakhula ngokukhululekile eminyakeni engaphansi kwengu-15. I-China Union Khokha izinkampani zesithathu njengomhlinzeki wenkonzo yokukhokha, ngokubaluleka kwansuku zonke okuthengiswayo, ngemuva kwe-MasterCard ne-Visa. Ngenxa yokwesekwa kwayo kusuka kuhulumeni waseChina u-CUP waba ngumhlinzeki wezinsizakalo zokukhetha ukukhokhela amabhange amane asekhaya aseShayina asekhaya.
Njengobe owaziwa kabanzi futhi ovame ukubizwa ngokuthi "Union Pay" noma "CUP", umhlinzeki wenkonzo manje ushicilele cishe amakhadi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyisihlanu emhlabeni jikelele. I-China Union Pay manje indlela yokukhokha eyamukelekile emazweni angaphezu kwe-150 futhi kusukela kubanikazi bekhadi le-2009 Union Pay bakwazi ukufinyelela kumakhansela e-Link futhi basebenzisa amakhadi abo ngokuzihoxisa kalula kulo lonke elaseYurophu.
I-China Union Ikhokha ngokushesha yaba yindlela ethandwayo yokukhokha yasekhaya yase-China ukuze izakhamuzi ezimakethe zomhlaba wonke zithathwe. I-China Union Pay ibhekene nendawo ebalulekile futhi yingxenye ebaluleke kakhulu embonini yasebhange yaseChina. Baye badlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni jikelele imboni yamakhadi eChina.
Ku-FXCC sihlale silwela ukuletha ukuthuthukiswa kuzo zonke izici zebhizinisi lethu eligxilwe ngamaklayenti. Ngakho-ke siqhubeka siqapha imboni yezezimali ngezindlela ezintsha zokukhokha i-akhawunti, ukuvumela amaklayenti ethu ukuba akhokhe kalula ama-akhawunti abo, noma avule ama-akhawunti amasha, ukuze athengise i-FX ngokusebenzisa amapulatifomu wethu wokunquma we-MetaTrader.